संघीयताको के कुरा गर्नु ? « Janata Samachar
संघीयताको के कुरा गर्नु ?
प्रकाशित मिति :9May, 2019 10:10 am
पहिले पहिले डिभाईड एण्ड रुलले सयौं वर्ष काम गर्यो । अहिले नागरिक अलि सचेत बन्दै गए । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको अलि अलि भएपनि अभ्यास हुन थाल्यो । अनि सदाशक्ति समुह चलमलाउन थाल्यो नयाँ फर्मुला शुरु भयो डाईभर्ट एण्ड रुल । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ प्रदेश नम्बर १ को राजधानी नामाकरण प्रकरण ।
खासमा यतिबेला व्यापक बहस, चर्चा, परिचर्चा र नागरिक दबाव नामाकरणमा हुनुपर्ने हो । कारण संघीयतामा संघीय राज्यको नामाकरणको ऐतिहासिक र सामरिक महत्व छ । यो सिंगो मुलुककै चासो र तर्कनाको विषय हो । पहिचान र आत्म सम्मानको विषय हो, नकि प्रदेश नम्बर १ को हकमा १६ जिल्लाबासीको मात्रै।
तर दुखद पक्ष के छ भने, सबैभन्दा बढी मोरङ, सुनसरी र धनकुटाले लिएको प्राविधिक अग्रता अर्थात प्रादेशिक राजधानीले नै चर्को बजार तताईरहेको छ । स्थानीय तहको अभ्याससँगै प्रादेशिक राजधानीको जनस्तरमा ठुलो महत्व रहन्न अर्थात दैनन्दिन काम पर्ने सवाल नभए पछि आम चासो कम, नेता अगुवा, व्यापारी चासो वढी हो ।
अहिले नामाकरणको विषयमा जुन हिसावले चर्चा परिचर्चा, मत अभिमत र निर्मम वहस हुनु पर्ने हो त्यसलाई चटक्कै अल्झाएर, झुलाएर घुमाएर अर्थात डाईभर्ट गरेर अलि वढी प्राविधिक लाग्ने मुख्यालयको विषयमा वन्द हडताल सम्मै हुनु यसैको परिणाम हो ठाडो भन्दा ।
आवश्यकता, तथ्य, मर्म, आधार र जनमतभन्दा भागशान्ति जय नेपालको अभ्यासमा रहेका परम्परागत दलहरुले नाम एउटा, भवन अर्को ठाँउमा राखेर ‘विन विन सिचुएशन’ मा रमाउँदै मख्ख भएपछि गण्डकी हुँदा कोशी किन नहुने भन्ने मत भिन्नतामा रमाउनु पर्ने अवस्था सृजना गर्दैछन् ।
प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी जस्तो झुर केही हुन सक्दैन विराटनगरको पनि सबै कोणवाट प्रभावकारी विकल्प हुँदाहुदै दक्षिण, दक्षिणा र दलालीको त्रिकोणात्मक दवाब, सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई दर्हो छ । जसलाई माईक्रोस्कोप नलगार्इ राम्ररी देखिंदैन ।
हुन त संघीयता नै चाहिँदैन । यो विदेशीको दबावमा लादिएको हो धान्नै सकिन्न भन्ने मत पनि अहिले बजारमा नभएको होईन । तर संघीयतालाई राजकीय सम्पत्ति बनाउने कि राजनीतिक एजेण्डा भन्ने वहस भुँईतहमै छताछुल्ल भईसकेको छैन । किनकी गणतन्त्रमा राजतन्त्रको बहस त टल्पलाईरहेको छ भने गण्डकी, मेची, कोशीवाला संघीयताको के कुरा गर्नु ?
२०७६ भदौ ७ गतेको राशिफल
मेष– धनको श्रोत जुट्नेछ । व्यवसायमा राहत मिल्नेछ । वृष– पहिचान स्थापित हुनेछ । राजनीतिमा अवसर पाइनेछ
‘भनाभनबाट नआत्तिऔं, फूलको आँखामा फूलै संसार’
घरमा श्रीमान् श्रीमतीको झगडा भयो भने दिक्क मान्ने ? अहिलेको भनाभन त्यही हो ।
संसदीय समितिद्वारा जोरपाटी–साँखु सडक अनुगमन
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतकाे विकास तथा प्रविधि समितिले जोरपाटी, साँखु सडक निर्माण स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
‘क्यान्सर अस्पतालमा नगर हस्तक्षेप’
नेपाली कांग्रेसका भक्तपुर सभापति दुर्लभकुमार थापाले क्यान्सर अस्पताल नगर हस्तक्षेत्र गरिएको बताउनु भएको छ ।
मेष– धनको श्रोत जुट्नेछ । व्यवसायमा राहत मिल्नेछ । वृष– पहिचान स्थापित हुनेछ । राजनीतिमा अवसर पाइनेछ । मिथुन–परोपकारमा मन जानेछ ।…
‘गौराले सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गरोस्’
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गौरा पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भू–उपयोग विधेयक प्रमाणीकरण
भू–उपयोग विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
‘सत्ता उल्टन सक्ने खतरा’
जनताकर्मी लिम्बू सम्मानित
टुँडिखेलमा ‘गौरा पर्व’ भव्यताकासाथ सम्पन्न
भक्तपुरमा गाईजात्रा समापन (फोटोफिचर)